४ वर्षमा पनि बनेन ७ सय मिटर बाटो ! – RadioMBC
Home > समाचार > ४ वर्षमा पनि बनेन ७ सय मिटर बाटो !
९ जेष्ठ २०७५, बुधबार १९:५७
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले काममा लापरवाही गर्ने निर्माण व्यवसायीको देशभरको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको खबरले दंगाली जनता खुसी भएका छन्। वर्षौंदेखि निर्माणाधीन सडक र पुलको काम अधुरै रहँदा यात्रामा ठूलो जोखिम र हैरानी खेप्दै आएका दंगाली जनता अब केही हुन्छ कि भन्ने आशा गर्न थालेको छन्।
दाङका मुख्य बजारमा दुई वर्ष पहिलै पुरा हुनुपर्ने ‘फोर लेन’ सडक विस्तारको काम होस् वा तुलसीपुरदेखि लमही सडक खण्डमा निर्माणाधीन आधा दर्जन खोलाहरूमा पुल निर्माणको कामले अब गति लिन्छ कि ? भन्ने विश्वास गृहमन्त्रीको निर्देशनले जागृत भएको छ।
‘हामीले आन्दोलन गर्दा ठेकेदारले काम सुरू गरेको जस्तो बहाना गर्ने र जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै हुँदै आएको छ,’ तुलसीपुरका सचिन पौडेलले भने ‘कति पटक बाटो बन्द गर्दा काम सुरू गरेजस्तो गर्ने र फेरि काम बन्द गर्ने प्रवृति दोहोरिँदै आएको छ।’
पौडेलेको घर र व्यापार तुलसीपुर–घोराही रोडमै पर्छ। तर चार वर्ष पहिले निर्माण सुरू भएको सातसय मिटर सडक निर्माणको आज पनि अधुरै हुँदा गर्मी दिनमा सडकखण्ड धुलाम्मे र वर्षामा हिलाम्मे बन्छ।
त्यसले स्थानीयबासी, सर्वसाधारण यात्रुको स्वास्थ्य जोखिममा परेको छ भने व्यापार व्यवसाय चौपट बनेको उक्त रोडमा होटल गर्दै आएका व्यवसायी कृष्ण खड्का बताउँछन्।
‘जब सडकखण्ड भत्काएर भताभुङ्गो पारियो त्यसपछि पाहुना आउनै छोडे। यो बीचमा लाखौं घाटा व्यहोर्नु परेको छ’, खड्काले भने।
कतिपयले आफ्नो पसलको अगाडि यातायातका साधन नगुडुन् र धूलो नउडोस् भनेर छेकबार राख्ने प्रयास गर्दै आएका छन्।
‘कतिको बाटो छेकेर साध्य हुन्छ। त्यसले झनै यात्रामा जोखिम बढाएको छ’, खड्काले भने।
घोराही क्षेत्रको समस्या पनि यो भन्दा कम छैन। सँगै सुरू भएको झन्डै तीन किलोमिटर सडक विस्तारको काम घोराहीमा पनि पुरा भएको छैन। कछुवा गतिमा भइरहेको विकास निर्माणको कामले सर्वसाधारण आजित छन्।
पानी हाल्न लाखौं खर्च
निर्माणाधीन सडक खण्डमा दुई महिनायता तुलसीपुर उपमहानगरले धूलो नउडोस् भनेर दिनहुँ बिहान साँझ पानी हाल्दै आएको छ। दुईमहिना सडकमा पानी हालेको डेढलाख खर्च आएपछि पछिल्लो समय उपमहानगरकै ट्याङकर प्रयोग गरेर पानी हाल्न सुरु गरिएको छ ।
आफ्नै ट्याङकरको प्रयोगले मासिक ५० हजार जति खर्च आएको उपमहानगरका प्रवक्ता श्याम डाँगीले जानकारी दिए । पछिल्लो समय तुलसीपुर– घोराही सडक खण्ड निर्माणको (अख्तियारी) पाएका मध्य एकजना तुलसीपुर निवासी प्रकाश महतराले त्यसअघि आफै धुलो नियन्त्रण गर्न पानी हाल्थे ।
दुई महिना जति पानी हाल्दा लामिछाने जलसेवावाट एकलाख ८० हजारको विल आएपछि माग्दा सडक विभागले नदिएपछि पानी हाल्न छोडेको बताए ।
सडक धुलाम्मे हुँदा विरोधमा स्थानीयले सडक खण्ड बन्द गरेपछि उपमहानगरले पानी हाल्न थालेको हो । तर अव उपमहानगरपालिका पनि पानी हाल्न सक्ने अवस्थामा नरहेको प्रवक्ता डाँगीले बताए । ‘सबै पैसा सडकमै पानी हाल्दै स्वाहा हुन थाल्यो । अब यो भन्दा बढी खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’
निर्माणमा पनि सिन्डिकेट, ठेक्का एउटाको नाममा काम अर्कोले गर्दै
तुलसीपुरको वडा नं. ६ अन्तरगतको बरुवा गाउँले कुलोदेखि हात्तिखौवा चोकसम्मको सातसय मिटर सडक चार लेनको निर्माण गर्ने जिम्मा गौरी पार्वती निर्माण सेवा काठमान्डौंले पाएको छ । २०७१ साल साउन २७ गते सडक डिभिजन कार्यालय घोराही दाङ र उक्त निर्माण सेवाको विचमा भएको सम्झौता अनुसार १८ महिनामा काम पुरा गरेर हस्तान्तरण गरिसक्ने उल्लेख छ ।
त्यो मिति भनेको २०७२ माघ थियो । त्यो झन्डै साढे ५ करोड करोडको काम हो । तर गौरी पार्वती निर्माण सेवाका प्रोप्राईटर रामकुमार थापा त्यो विचमा कहिलै दाङमा आएर काम गरेनन् । बरु थापाले उनले आफ्नो कामगर्ने अख्तियारी दाङ घोराहीका पदम शर्मालाई सुम्पिएका थिए ।
तर तिनै शर्माले घोराहीको कटुवाखोलादेखि डाँगी भवनसम्मको सडक विस्तारको समेत अरुवाट त्यसैगरी अख्तियारी लिएका छन् ।
घोराहीमा चार लेनको सडक विस्तार गर्ने अख्तियारी शर्मालाई कान्छाराम शंकर माली जेभीले सुम्पेको छ । यत्तिमात्रै हैन, तिनै शर्माले घोराहीकै कटुवा खोला र पत्रखोलाको पुल निर्माणको जिम्मा समेत लिएका छन् ।
तर उनले अख्तियारी पाएका कुनैपनि काम हालसम्म पुरा भएका छैनन् । सबै काम अधुरै र अपुरै रहेको सडक डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख बद्रीप्रशाद शर्माले जानकारी दिए । उनले घोराहीमा कटुवाखोलादेखि डाँगी भवनसम्मको १४०० मिटरको सडक फोरलेनको रुपमा विकास गर्ने जिम्मा पाएका छन् । तर उनले त्यहाँ हालसम्म एक किलोमिटर मात्रै काम पुरा गरेका छन् ।
त्यो काम ११ करोडको रहेको डिभिजनका प्रमुख शर्माले बताए । घोराहीको तुलसीपुर चोकदेखि डाँगी भवनसम्मको ४०० मिटरको फोरलेनको सडक निर्माणको जिम्मा लुम्विनी जलजला निर्माण सेवाले पाएको छ । चार करोडमा उक्त कम्पनीले काम स्वीकार गरेको सम्झौतामा उल्लेख छ ।
तर उक्त कम्पनीले पनि आफैले काम नगरेर त्यसको अख्तियारी घोराहीकै ईश्वर पुनलाई सुम्पिएको छ । उनले पनि हालसम्म साढे दुईसय मिटरको काम मात्रै पुरा गरेको डिभिजन सडक कार्यालय घोराहीका प्रमुख बद्रिप्रशाद शर्माले जानकारी दिए । यी त केही उदाहरण मात्रै हुन ।
पहुँच र गुन्डा लगाएर एउटाको फर्म प्रयोग गरि टेन्डर पार्ने अनि कामगर्ने जिम्मा अर्कोलाई दिने सिन्डिकेट प्रथाले गर्दा विकास निर्माण प्रभावित भएको सरोकारवालाहरुले बताउने गरेका छन् ।
फर्म अरु कसैको र कमिसनमा अर्को व्यक्तिलाई काम सम्पिने ‘सिन्डिकेट’ प्रवृतिले गर्दा विकास निर्माण प्रभावित हुँदै आएको जानकारहरु बताउँछन् । यसमा टोले गुन्डादेखि नेता र मन्त्री समेतको मिलेमतो हुने गरेको एकजना निर्माण व्यवसायीले बताए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (विप्लव) का कार्यकर्ताले निर्माणको काममा लापरवाही गरेको भन्दै केही समय पहिले निर्माण व्यवसायी पदम शर्मालाई घोराहीको सार्वजनिक स्थानमै कालोमोसो पनि दलेका थिए । तिनै शर्माले समयमै काम नसकेर लथालिङ्ग र भताभुङ्ग अवस्थामा छोडेको भन्दै निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीले उनलाई हटाइएको थियो ।
त्यसपछि तुलसीपुरमा सडक निर्माणको काम २०७४ कार्तिक बाट निर्माणको जिम्मा पाएको गौरी पार्वती निर्माण सेवाले फेरि तुलसीपुरका प्रकास महतरा र तुलसीपुरकै दुधरास निवासी बामदेव रेग्मीलाई उक्त कामगर्न अख्तियारी दिएको छ । उनीहरुले २०७४ मंसिर अन्त्य सम्ममा सडक निर्माणको काम सकेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सर्तमा जिम्मा लिएका थिए ।
त्यसपछि उनीहरुले गत चैत मसान्तमा काम सक्ने वाता गरेका थिए । तर हालसम्मपनि सडक निर्माणको काम अधुरो र अलपत्र नै छ । काम कहिले सकिन्छ भन्ने स्पष्ट आधारहरु अझैं देखिएका छैन ।
पैसा नपाउँदा समस्या भयो – निर्माण व्यवसायी
दाङमा हाल ठूला पुल मात्रै ३ दर्जन बढि निर्माणाधिन छन् । कुनै दिन प्रदेश नं. ५ को राजधानीको रुपमा निकै चर्चा पाएको दाङमा यतिबेला सडकको स्तरोन्नति कामले पनि तीव्रता पाउनु स्वाभाविक नै हो । तर जिल्लाका मुख्य बजारहरु पुरानो अञ्चल सदरमुकाम तुलसीपुर र जिल्ला सदरमुकाम घोराही क्षेत्र विगत चारवर्ष यता गर्मी मौसममा धुलाम्मे तथा बर्षातमा हिलाम्मे हुने गरेका छन् ।
निर्माणाधिन सडक खण्ड र पुल समयमै पुरा नहुँदा सालिन्दा बाढीले दर्जनौ सवारी साधन बगेर ठूलो धन जनको क्षति हुने गरेको छ ।
काम किन समयमै पुरा नभएको हो ? भन्ने प्रश्न गर्दा– तुलसीपुर– घोराही सडक खण्डको सातसय मिटर फोरलेन निर्माणको अख्तियारी पाएका तुलसीपुरका प्रकाश महतराले काम गरेको पैसा सडक डिभिजनले नदिदा थप काम गर्न नसकिएको बताए । ‘सबैभन्दा ठूलो पैंशा नै हो, हामीले काम गरेको पैसा सडकले दिएको छैन । त्यसैले काममा ढिलाई भएको हो ।’
महतराले हालसम्म आफुले डेढ करोडको काम गरिसकेको र त्यसमध्ये ८२ लाखको विल बुझाएकोमा जम्मा ३८ लाख मात्रै भुक्तानी पाएको तथा अझैं २२ लाख नपाएको बताए । उनले राज्यले आफुले पेश गरेको विल अनुसारको रकम समयमै दिए आगामी असारसम्म सडक निर्माण कार्य पुरा गरेर हस्तान्तरण गर्ने बताए ।
‘सायद राज्यसंग नै पैसा छैन होला । त्यसैले राज्यले पैसा नदिए असारमा सकिन्छ भन्ने कुरा गाह्रो हो ।’
उनले सडकले दिएको ३८ लाख मध्य २५ लाखको २१ टन अलकत्रा किनेर ल्याइसकेको भन्दै थप पैंशा पाएमा धमाधम काम अगाडि बढ्ने बताए ।
‘हामीलाई गाली गर्नुभन्दा राज्यले गरेको कामको पैसा दिनुपर्छ । त्यसपछि काम नभए हामी कारवाही भोग्न तयार हुनेछौं’, महतराले भने ।
महतराको जस्तै गुनासो जिल्लामा निर्माणको जिम्मा पाएका अन्य निर्माण व्यवसायीहरुले पनि गरेका छन् ।
पैसा पाएनौं भनेर काम रोक्न पाईदैन – प्रमुख शर्मा
सडक डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख बद्रीप्रशाद शर्माले निर्माणको जिम्मा पाएका निर्माण व्यवसायीले पैसा पाएनौं भन्ने बाहानामा काम रोक्न नपाउने बताउँछन् ।
‘समयमै काम सक्छौं भनेर उहाँहरुले काम स्वीकार्नु भएको छ । त्यसैले उहाँहरुले कुनैपनि बाहानाबाजी गरेर काम रोक्न पाउनु हुन्न ।’ शर्माले भने ।
उनले जसरी पनि असारसम्म बाटो निर्माण पुरा गरेर बुझाई सक्नुपर्ने बताए ।
‘कि काम गर्नु प¥यो, कि ठेक्का तोड्नु पर्‍यो’, प्रमुख शर्माले भने । आफुहरुले जनताको आवाज सुनिरहेको हुँदा जनताले भनेको मान्न तयार रहेको र त्यसका लागि कदम चाल्न बाध्य हुने उनले बताए ।
‘मुख्य बजारको कामको जिम्मा लिने र वर्षौंसम्म काम पुरा नगर्नेलाई कारवाही गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ’ शर्माले भने ।
तर उनले त्यसमा पनि केही समस्या रहेको बताए ।
पेश गरेको विल अनुसार भुक्तानी दिन नसकेको हुँदा कालो सूचिमा राखेर कारावाही गर्न नीतिगत समस्या छ । हामीलाई नीतिगत समस्या छ । हामीले कारवाही गर्न नसकेको होईन बरु कारवाही गर्न नपाएको हो’, प्रमुख शर्माले भने ।
तर उनले जिल्लाका मुख्य बजार क्षेत्रमा निर्माणाधिन सडक भएको हुँदा पेश गरेको विल अनुसार अरुलाई दश प्रतिशत भुक्तानी दिदा सडक निर्माण गरिरहेकाहरुलाई १५ प्रतिशत भुक्तानी दिएको जानकारी दिए ।
उनले गत असार महिनासम्म सडक विभाग मार्फत भुक्तानीको अधिकार भएपनि गत असारदेखि त्यो अधिकार नभएको हुँदा आफुहरुले केही गर्न नसक्ने बताए ।
‘त्यो भुक्तानी संघले दिने कि प्रदेशले ? अझैं टुङ्गो लागेको छैन । त्यसैले हामी अप्ठेरोमा छौं’, शर्माले भने । दाङमा एकसय ३० वटा बाटो रहेको र एक अर्वको ठेक्का लागेको तर त्यसको पैंशा भने नआएको उनले बताए । हाल उनले १५ प्रतिसत पैसा मात्र आएको बताए ।
राम्रो ठेकेदार नपाउँदा काममा समस्या – मेयर पाण्डे
पटक-पटक तुलसीपुर क्षेत्रमा स्थानीयले धुलो अचाक्ली भएपछि त्यसको विरोधमा आन्दोलन छेड्दा, सडक खण्ड बन्द गर्दा मेयर घनश्याम पाण्डे पुगेर तुरुन्तै काम सुरु गर्ने वाचा गर्दै बन्द खुलाउने गर्दै आएका छन् ।
उनले त्यहीबाट ठेकेदारलाई हकारेर,आग्रह गरेर कामको सुरुवात त गराउँछन् तर त्यो एकदुई दिनका लागि मात्रै हुने गरेको छ । त्यसलाई उनले राम्रो ठेकेदार नपाउँदा उत्पन्न समस्याको रुपमा अथ्र्याए ।
‘त्यो सबै राम्रो ठेकेदार नपाउँदाको समस्या हो । कामको जिम्मा लिएपछि जसरीपनि पुरा गरेको हुनुपर्छ’, मेयर पाण्डेले भने । तर उनले आफुलाई सडक निर्माणको जिम्मा पाएका ठेकेदारले मेसिन नपाएको हुँदा काममा ढिलाई भएको भन्ने जानकारी दिएको बताए ।
‘पैसाको व्यवस्था छ र हुन्छ । जसरी पनि निर्धारित समयमा काम सकेको हुनुपर्छ’, मेयर पाण्डेले भने ।
मेयर पाण्डेले काम स्वीकारे अनुरुप काम समयमै पुरा नगरे कालो लिष्टमा राखेर कारवाहीको प्रकृया थाल्ने चेतावनी दिए ।